Ahoana ny fomba handresena ny tahotra fanovana ary hiatrehana fahatokisan-tena amin'ny fanamby vaovao - An-Tsaina
Te mandresy ny tahotra ny fanovana? Ity no $ 14.95 tsara indrindra laninao.
Matahotra ny fanovana isika, ary mahatsiaro ho voaro sy mampionona ny fanaontsika. Na izany aza, ny fifandraisana, ny asanao, ny toetranao ary ny toe-bolanao dia miova tsindraindray mandritra ny androm-piainana.
Mety hisy ireo fanovana ireo saina , na dia manome tombony be aza ny valiny. Ohatra, ny fahazoana fampiroboroboana dia mety hidika ho karama ambonimbony kokoa, saingy mety tsy hahatsapa ianao fa afaka mitantana ny sasany amin'ireo andraikitra vaovao anananao.
Avy amin'ny traikefa dia efa fantatrao fa ho zatra ireo fanovana rehetra ireo ianao amin'ny farany. Amin'ny voalohany dia mety mikorontan-tsaina momba ny fomba hampifanarahana ny toe-javatra vaovao misy anao ianao, fa na ho ela na ho haingana dia ho lasa status quo vaovao ireo.
Amin'ity torohevitra manaraka ity dia azonao atao ny mandresy ny fahatahoranao ny fanovana ary hanaiky am-pahatokisana ireo fanamby vaovao ianao ary hiaritra ny fihenjanana kely kokoa mandritra izany.
1. Manantena ny tsara indrindra ary miomana amin'ny ratsy indrindra
Mahafinaritra ny manana a toe-tsaina tsara . Rehefa misokatra kokoa amin'ny eritreritra tsara ny sainao dia mety hiditra amin'ny zava-misy ianao. Izy io dia fomba tsara kokoa hiaina raha oharina amin'ny fiahiahiana pessimistically ny mety ho vokany ratsy rehetra.
Na izany aza, ny olona manantena fatratra fotsiny dia mety ho simba rehefa tsy tonga eo aminy ny fiovana eo amin'ny fiainana. Amin'ny fanomanana ny valiny ratsy indrindra azo atao, azonao atao ny mampiofana ny tenanao hanaiky izay mety hitranga.
ny fomba handosirana sy hananganana fiainam-baovao
Alao an-tsaina hoe manatrika tafatafa amin'ny asa ianao ary toa mandeha tsara izany. Tena azonao antoka fa nahazo ilay asa ianao ka tsy mangataka intsony. Saingy mandalo herinandro tsy omen'ilay mpampiasa anao ny toerana. Nandany fotoana ianao ary vao mainka nampisy adin-tsaina kokoa tamin'ny tsy fanekena ny mety tsy fandraisan'izy ireo anao.
Tandremo ny haavon'ny pessimism anao manodidina ny hetsika amin'ny ho avy. Ny ahiahy dia manery anao hiomana amin'ny fahaverezan'ny asa, ny fandaniana ara-pahasalamana tsy ampoizina, na ny zavatra hafa tsy azo ihodivirana. Na izany aza, ny fanahiana be loatra dia miteraka fanahiana tsy ilaina amin'ny fisehoan-javatra izay tsy misy akory.
Manontania tena hoe: “Manahy ny zavatra tsy hitranga akory ve aho?” Raha eny ny valiny, dia angamba io fanahiana be loatra io dia nanampy anao hisoroka toe-javatra tsy mahazo aina sasany. Na izany aza, manalavitra ireo fotoana mety hitombo ianao. Aza adino ny tenanao dia ho tsapanao fa marina izany.
Ny olona sasany dia mahafoy ny asany satria miahiahy izy ireo sao hahavita ratsy. Ny olona sasany dia misoroka ny fotoana ahafahana mifanerasera satria manahy ny hahamenatra ny tenany izy ireo.
Ny fisehoan-javatra tsara sy ny ratsy amin'ny ho avy dia miteraka fanahiana mafy amin'ny olona, ​​fa na manao ahoana na manao ahoana ny tarehin-javatra dia azonao atao ny miomana amin'izany. Mety tsy ho afaka hamorona vahaolana avy hatrany ianao. Afaka miomana am-pientanam-po anefa ianao. Azonao atao ny mizatra manaiky ny mety hiovan'ny toe-javatra misy anao.
Diniho izay mety rehetra azo atao. Alao an-tsaina ny fanekena sy ny fikirakirana ny valiny na inona na inona. Manampy anao hiala sasatra sy hampihena ny adin-tsaina izany, na inona na inona mitranga.
2. Tandremo ny fanovana ho avy
Raha pessimistic be ianao dia tsara ho an'ny fahasalamanao ny mifantoka ary misaotra an'i , ny harena be rehetra efa misy eo amin'ny fiainanao. Na izany aza, ny olona sasany dia mifantoka be amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany ka tsy raharahain'izy ireo ny famantarana ny fanamby ho avy.
Amin'ny lafiny iray, tsy mitovy amin'ny fihenjanana kely kokoa izany. Raha tokony hiahiahy momba ny hetsika amin'ny ho avy mety hitranga izy ireo na tsia, dia mirona hankafy izany fotoana izany izy ireo. Ny olana dia, raha miova tampoka ny toe-javatra, dia mety ho toy izany koa ny toe-pony.
Rehefa raiki-tampisaka amin'ny fanaontsika isan'andro isika dia mety halaim-panahy tsy hiraharaha ireo famantarana ny fanovana ho avy. Fa io dia mamela anao tsy voaomana bebe kokoa fotsiny rehefa tena misy ny fiovana.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanazaran-tsaina ny fihetsikao manoloana ny fanovana toy izany. Tsy ho fantatrao fotsiny izay hatao, fa ny tena fanovana dia tsy hampatahotra.
Manontania tena hoe: “Ahoana raha ___ no mitranga? Inona no hataoko? ” Ity fanatanjahan-tena ity dia manampy anao hiomana am-pientanam-po sy ara-tsaina amin'ny hetsika ho avy. Ampiharo ihany koa ny fanekena ireo fisehoan-javatra niainanao tamin'ny fanazaran-tsainao.
Rehefa mitranga ny fanovana na ny fanamby amin'ny ho avy dia ho vonona ianao handray andraikitra mifanaraka amin'izany. Hahatsapa ho tsy dia adin-tsaina amin'izany koa ianao satria efa nampihatra ny fanekena ny fanovana fa tsy ny fanoherana azy.
Ny maodelin'ny fanovana 5 (Transtheoretical) maodelin'ny fiovan'ny fitondran-tena
Ny tena antony anananao tahotra ny tsy fahombiazana (sy ny zavatra hatao momba izany)
Zavatra 10 Tena tsy tokony atahoranao amin'ny fiainanao
Zavatra 7 Tsy mitovy ny zavatra ataon'ny olona milamina
Mampifandanja ny toerana misy anao eo an-toerana ivelany: Ny fitadiavana ny toerana mamy
3. Ampio ny fanamby amin'ireo sombin-javatra kely kokoa
Mety ho tena henjana mieritreritra ny antsipiriany rehetra momba ny fanovana lehibe. Kosa, araraoty ho kely kokoa sy mora azo tanterahina kokoa ny fanovana. Raha tokony hiezaka ny hifanaraka amin'ny zavatra rehetra miaraka ianao dia afaka manokana fotoana handaminana ny lafiny tsirairay amin'ilay fanovana.
Ny chunking dia fomba iray hanamboarana endrika tetikasa lehibe na fanamby handresena lahatra ny tenanao fa kely kokoa sy azo tantanana kokoa izy ireo. Tetikasa goavambe toa mety tsy ho vita. Mety hahatsapa ho sorena ianao noho ny halehiben'io ka mandà ny hanomboka akory ianao.
Na izany aza, raha afaka mandresy lahatra ny tenanao ianao hifantoka amin'ny ampahany kely amin'ny fanamby ary hanadino ny ambiny, dia tokony ho mora kokoa ny mandray ilay ampahany nofidinao hiasa. Ohatra, alaivo an-tsaina hoe te hanoratra boky ianao. Raha mifantoka amin'ny fanoratana boky iray manontolo ianao dia mety hahatsapa fa asa be loatra izany. Fa raha mifantoka amin'ny fanoratana toko iray ianao anio, na pejy iray monja aza dia azo inoana kokoa fa hino ianao fa mahavita ilay asa kely kokoa.
mila mihalehibe ny olona sasany
Toy izany koa amin'ny fiovan'ny fiainana maro. Raha tokony hiezaka hamaha ny olana rehetra ianao hatramin'ny voalohany, dia mifidiana asa kely kokoa izay inoanao fa ho vitanao. Vantany vao vitanao izany asa izany, ny fahatsapana ny zava-bita dia tokony hanampy anao hamaha ny fanamby manaraka.
4. Tsy misy nenina
Ny traikefa manova fiainana dia mety ho tonga amin'ny fahatsiarovana maharary. Indraindray, tsy misy safidy tsara. Tsy azo ihodivirana, mety ho lasa manontany tena ianao hoe inona no mety / mety hitranga raha toa ka misafidy hafa ianao.
Farany, fandaniam-poana amin'ny herin'ny saina io. Raha manenina ianao amin'ny fanovana ny fiainanao, dia mety hitazona ny sainao hilamina ihany izany taloha. Aleo manokatra ny sainao amin'ny fotoana vaovao. Mifantoha amin'ny ho avy sy ny fiovana mety hanatsara ny fiainanao.
5. Raiso ny fanovana
Makà taratasy iray ary soraty ny fanovana 10 nanatsara ny fiainanao. Makà fotoana raha ilaina izany. Mety ho zavatra toy ny sekoly ambaratonga voalohany ireo, manomboka asa vaovao, mamarana ny fifandraisana ratsy, na koa mividy solosaina vaovao.
Natahotra ireo fiovana ireo ve ianao?
Natahotra ve ianao?
Firy amin'ireo fanovana ireo no hita fa tsara kokoa noho ny noeritreretinao?
Ity fampiharana ity dia afaka manampy anao hankasitraka ny fahaizanao maharitra fiovana. Mety misy traikefa tena ratsy eo amin'ny lisitrao. Fantaro ny fomba nanampian'ny traikefa anao hivoatra. Hanampy anao hiatrika fanamby amin'ny ho avy izany. Isaky ny miatrika fanamby anao ny fiovana dia ahafahanao manararaotra mampiasa ny mety ho vitanao.
Tsy tokony hatahorana ny fanovana. Ny tena tokony atahoranao dia ny fitazonana ny fanazarana tsy miova, ary haavon'ny fahatsiarovan-tena mandrakizay. Mijanona fotsiny izany fa tsy fitomboana. Fa kosa, amin'ny fanekena ny fanovana dia manokatra ny tenanao amin'ny zavatra mety hitranga vaovao ianao.
Afaka manampy anao ve ity fisaintsainana ity ajanony ny tahotra ny fanovana ? Heverinay izany.
aiza no hijerena an'i brooklyn 99
nalaina avy tao amin'ny tao amin'ny pooh
oviana i eddie guerro no maty
famantarana fa tsy eo aminao intsony izany
iza no olivia rodrigo mampiaraka izao
rehefa misy mandainga aminao ary fantatrao ny marina